နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ (COPD) ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ - Hello Sayarwon
Dr. Ye Mhan Linn မှ ရေးသားသည်။ 01/11/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
COPD လို့ အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်တဲ့ နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါဟာ သင့်ရဲ့အဆုတ်တွေနဲ့ အသက်ရှူနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေပြီး အသက်ကိုပါခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်အကြောင်း ပြောရရင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ အဆုတ်အတွင်းက လေအိတ်ငယ်တွေ ထိခိုက်ပျက်စီးရာကနေ အစပြုတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ချွဲသလိပ်တွေထွက်ပြီး ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရောဂါဆိုးရွားလာတာနဲ့အမျှ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ COPD ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ အဆုတ်တွေဟာ မူလအခြေအနေအတိုင်း ပြန်ကောင်းလာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရောဂါမဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးခြင်းအားဖြင့် COPD ဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။
COPD ရဲ့ မူလအစ
COPD ဆိုတာ နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါပေါင်းများစွာထဲက တစ်ခုကို အမည်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ COPD ရဲ့ အဓိကရောဂါအခြေအနေနှစ်ခုကတော့ chronic bronchitis ခေါ် နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ emphysema ခေါ် အဆုတ်အတွင်းရှိ လေအိတ်ငယ်များ ပျက်စီးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေနှစ်ခုဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့ မတူညီတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတာဖြစ်ပေမယ့် နှစ်ခုလုံးကတော့ ဝေဒနာရှင်ကို အသက်ရှူရခက်ခဲစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
COPD ရဲ့ ရောဂါဖြစ်စဉ်ကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆုတ်တွေရဲ့တည်ဆောက်ပုံကို ကောင်းစွာသိရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရင်ဦးဆုံး သင်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေဟာ လေပြွန်မကြီးကတဆင့် လေပြွန်ခွဲနှစ်ခုဆီ ရောက်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းလေပြွန်ခွဲနှစ်ခုဟာ လေပြွန်ငယ်ပေါင်းများစွာအဖြစ် ထပ်မံခွဲဖြာသွားပြီး ဆံခြည်မျှင်သွေးကြောလေးတွေ ယှက်သန်းသွားလာနေတဲ့ alveoli အမည်ရှိ လေအိတ်ငယ်တွေမှာ အဆုံးသတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Alveoli မှာရှိတဲ့ ဆံခြည်မျှင်သွေးကြောလေးတွေက အဆုတ်ကလာတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို သယ်ဆောင်ပေးပြီး သွေးထဲက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေကို အဆုတ်ဆီရောက်ရှိစေကာ အသက်ရှူထုတ်ခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပဆီ စွန့်ထုတ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Emphysema ဆိုတာ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ လေအိတ်ငယ်တွေ ထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေအိတ်ငယ်တွေရဲ့နံရံက အမျှင်တွေ ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက် ၎င်းတို့ရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်မှုအား နည်းပါးလာပြီး အသက်ရှူထုတ်တဲ့အခါ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Bronchitis ဆိုတာကတော့ လေပြွန်တွေရောင်ရမ်းပြီး ချွဲသလိပ်တွေ ပိုမိုထွက်လာခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်တဲ့အထိ လေပြွန်ရောင်ရမ်းမှု မသက်သာခဲ့ရင်တော့ Chronic Bronchitis ခေါ် နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ရမ်းတဲ့ အခြေအနေအထိ ရောက်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါဆိုသလို ရုတ်တရက် လေပြွန်ရောင်ရမ်းတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့် ဒါကို COPD လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။
COPD ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကတရားခံကတော့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်မီးခိုးနဲ့ အခြားအန္တရာယ်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေကို ရှူရှိုက်မိခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ အဆုတ်အတွင်းက လေအိတ်ငယ်တွေ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်ပြီး COPD ဖြစ်မယ့်အလားအလာကို အလွန်မြင့်တက်စေပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်မသောက်ပေမယ့် သူတစ်ပါးရဲ့ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှူရှိုက်မိခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ရာမှ ထွက်လာတဲ့ မီးခိုးညှော်နံ့များကို ရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့်လည်း အဆုတ်ရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
COPD ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ဘယ်လိုသတိပြုမိနိုင်သလဲ
များသောအားဖြင့် COPD ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေဟာ ရောဂါအဆင့်မြင့်ချိန်ရောက်မှသာ ပေါ်လာလေ့ရှိတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်ပျက်စီးလာတာနဲ့အမျှ အနည်းငယ် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်မိရုံနဲ့ မောလာနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ ပုံမှန်လုပ်နေကျအလုပ်တစ်ခု (ဥပမာ လှေကားတက်ခြင်း) ကို ပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာ အသက်ရှူရခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသသင့်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အသက်ရှူမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ၎င်းရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်မှုတို့ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် သင့်မှာ နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ အဆုတ်တွင်းရှိ လေအိတ်ငယ်များ ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ အခြေအနေနှစ်ခု ရှိမရှိ သိရှိနိုင်ပါတယ်။
COPD ဝေဒနာရှင်တွေကို အသက်ရှူရခက်ခဲစေတဲ့ နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ အဆုတ်ထဲမှာ ချွဲသလိပ်ထုတ်လုပ်မှု ပိုများလာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ လေပြွန်ခွဲငယ်တွေ ပိုမိုရောင်ရမ်းကျဉ်းမြောင်းလာပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲမှာ ချွဲသလိပ်တွေ ပိတ်ဆို့လာတာနဲ့အမျှ အောက်ဆီဂျင်ရှူသွင်းနိုင်မှု ကျဆင်းလာသလို အဆုတ်ထဲက ဆံခြည်မျှင်သွေးကြောလေးတွေဆီ အောက်ဆီဂျင်ရောက်ရှိမှု လျော့နည်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆုတ်ထဲက ချွဲသလိပ်တွေ အပြင်ရောက်အောင် ချောင်းဆိုးပြီးဟပ်ထုတ်ရခြင်းက COPD လူနာတွေမှာ ဖြစ်နေကျ လက္ခဏာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ ချောင်းဆိုးသည်ထက်ဆိုးလာမယ်၊ ချွဲသလိပ်တွေ ပိုပိုထွက်လာမယ်ဆိုရင် ပေါ့ဆမနေဘဲ ဆရာဝန်နဲ့ မဖြစ်မနေပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
COPD ရောဂါအဆင့်မြင့်လာတဲ့ လက္ခဏာများ
COPD ရောဂါ အဆင့်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာများစွာဟာလည်း ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဒနာရှင်လူနာဟာ ကာလကြာမြင့်စွာ ချောင်းဆိုးနေရာကနေ အသက်ရှူလိုက်တိုင်း တရွှီရွှီမြည်သံ ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချွဲသလိပ်တွေ များပြားစုပုံလာတဲ့အပြင် လေပြွန်ခွဲငယ်နဲ့ လေအိတ်ငယ်တွေ ကျဉ်းမြောင်းလာခြင်းရဲ့ ရလဒ်အဖြစ် ရင်ကြပ်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်း ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာမှုရဲ့ ပုံမှန်လက္ခဏာတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် သမားတော်နဲ့ပြသပြီး စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုခံယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
COPD ရဲ့ နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ လှည့်ပတ်နေတဲ့သွေးထဲမှာ အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးလာတဲ့အတွက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားအင်ကုန်ခမ်းသလို ခံစားရခြင်းဟာ အမျိုးမျိုးသော ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ၎င်းဟာ သင်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါရဲ့ ပြင်းထန်မှုအခြေအနေကို အကဲဖြတ်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ဆရာဝန်ကို မဖြစ်မနေ ပြောပြသင့်ပါတယ်။ COPD ရောဂါအခြေအနေ အလွန်ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ လူနာတွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
COPD မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ
COPD မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဆေးလိပ်လုံးဝမသောက်ခြင်းပါပဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆေးလိပ်သောက်လာသူတွေတောင်မှ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ အဆုတ်ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ဆေးလိပ်ဖြတ်သည်ဖြစ်စေ ဆေးလိပ်မသောက်တဲ့ကာလ ကြာလေလေ COPD ဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ချနိုင်လေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်သာမက သင့်ကျန်းမာရေးကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး သင့်ဆရာဝန်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေအတိုင်း လိုက်နာနေထိုင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ COPD နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကံသေကံမ ပြောနိုင်တာမျိုးမရှိပေမယ့် ရောဂါဖြစ်မလာခင် မိမိကိုယ်ကိုယ် ကြိုတင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းက သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲ။
What is COPD? http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/copd/. Accessed August 19, 2015
William MacNee. Pathology, pathogenesis, and pathophysiology. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1463976/. Accessed August 19, 2015
Chronic obstructive pulmonary disorder. http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/pulmonary/chronic-obstructive-pulmonary-disease/. Accessed August 19, 2015
Mayo Clinic Staff. COPD: Causes. Retrieved from http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/copd/basics/causes/con-20032017. Accessed August 19, 2015